Umbuzo: Iza kuCwangcisa i-B Mess Up Your Cycle-BikeHike
Isicwangciso B siyonakalisa ixesha elingakanani umjikelo wakho?
Ngaba intsasa yasemva kwepilisi inokumosha umjikelo wakho kangangeenyanga?
Ngaba ungafumana ixesha lesibini emva kokuthatha iPlani B?
Ngaba isicwangciso B siyayitshintsha i-ovulation yakho?
Ngaba iSicwangciso B siyasilela?
Ngaba i-morning after pill inokuchaphazela ixesha lakho kwiinyanga ezi-2 kamva?
Ngaba unokuphunyelwa sisisu emva kokuthatha iPlan B?
Ndazi njani ukuba ndiyabhabha?
Ziziphi iimpawu ze-ovulation?
Ndixela njani xa ndikhupha i-ovulation?
Ngaba kukho umntu okhulelweyo emva kokuthatha iPlan B?
Ngaba ipilisi yasekuseni iyasebenza ukuba ingene ngaphakathi kuwe?
Ngaba ukuthatha iPlan B kuyamchaphazela usana lwakho?
Ngaba isicwangciso B siyingozi ukuba sele ukhulelwe?
Ngaba iSicwangciso B sinokukunika uvavanyo lokukhulelwa oluqinisekileyo?
Ziziphi iimpawu zokukhulelwa kwiveki yokuqala?
Unokwazi njani ukuba uchumile ekhaya?
Ngaba unokukhulelwa ukuba awuyi-ovulating?
Ndazi njani ukuba andiyiyo i-ovulation?
Zingaphi iintsuku ngaphambi kokuba ukhulelwe i-ovulation?
I-Levonorgestrel ifumaneka kwiipilisi zokulawula ukuzalwa, kodwa iSicwangciso B siqulethe umthamo ophezulu onokutshintsha amanqanaba e-hormone yendalo yomzimba wakho. Iihomoni ezongezelelweyo zinokuchaphazela umjikelo wokuya exesheni, okukhokelela kwixesha langaphambili okanye elilibazisekileyo kunye nokopha okukhulu okanye kancinci.
Uninzi lweenguqu ezibangelwa zizithinteli zokukhulelwa ezingxamisekileyo ezifana neSicwangciso B aziqhubeki ngaphaya komjikelo omnye wokuya exesheni. Ukuba ixesha lakho liphelile iveki emva kokuba uthathe iSicwangciso B, kukho ithuba lokuba ukhulelwe, ngoko cinga ukuthatha uvavanyo lokukhulelwa.
Ukuthatha i-Plan B (ekwabizwa ngokuba yi-contraception yongxamiseko, okanye i-morning-after pill) kunokutshintsha okwethutyana umjikelo wokuya exesheni komntu, ngoko ke ixesha lentombi yakho liya kwahluka kangangenyanga ubuncinane. Akukho nto iyingozi okanye inobungozi malunga nokusebenzisa ipilisi yasekuseni emva koko rhoqo njengoko kufuneka.
Okunye ukopha okungaqhelekanga-okukwabizwa ngokuba yi-spotting-kungenzeka emva kokuba uthathe ipilisi yasekuseni. Ukuya exesheni lakho emva kokuthatha i-contraception (EC) luphawu lokuba awukhulelwanga. Kukwayinto eqhelekileyo ukuba ixesha lakho libenzima okanye libe khaphukhaphu, okanye ngaphambi okanye emva kwexesha kunesiqhelo emva kokuthatha i-EC.
Ngokweleyibhile yemveliso, iSicwangciso B sithintela okanye silibazise i-ovulation, okanye ukukhululwa kweqanda. Isenokuthintela nokuqhama, xa iqanda nedlozi zidibana.
Idosi enye yeepilisi zothintelo lokukhulelwa ezingxamisekileyo zithintela ukukhulelwa malunga ne-50-100% yexesha. Ezinye izizathu zokuba iipilisi zoqingqo-nzala zikaxakeka zinokusilela ziquka ixesha lokuphuma kweqanda, i-BMI kunye nokusebenzisana kweziyobisi.
“Imorning after pill inokulibazisa ixesha lakho elilandelayo kodwa ayisoloko isenza njalo. UJulia uthi: “Noko ke, ukuba ixesha lakho lisemva kweentsuku ezisixhenxe, ufanele wenze uvavanyo lokukhulelwa.”
I-Plan B ayinakukhupha isisu okanye ikulimaze ukuba sele ukhulelwe. Ukuba AWUfumani naluphi na ukopha kwilungu lobufazi kwiiveki ezi-3 emva kokuthatha iSicwangciso B, tsalela iZiko lezeMpilo ku-685-2470 ukuze ufumane idinga.
Ubude bomjikelo wakho wokuya exesheni – i-ovulation ngokuqhelekileyo iyenzeka malunga neentsuku ezili-10 ukuya kwezili-16 phambi kokuba kuqale ixesha lakho, ngoko ke ungakwazi ukubala xa kunokwenzeka ukuba ukhuphe i-ovulation ukuba unomjikelo oqhelekileyo. Umfinya womlomo wesibeleko - unokuqaphela ukuba manzi, okucacileyo kunye nokutyibilika ngakumbi ngexesha le-ovulation.
Iimpawu ze-Ovulation Isiphumo esihle kuVavanyo lwe-Ovulation. I-Mucus yoMlomo weSibeleko Ukwandiswa Komnqweno Wesondo. Ubushushu bomzimba weBasal Ukunyuka. Utshintsho kwiSimo soMbeleko. Ukuthamba kwebele. Ipateni ye-Saliva Ferning. Iintlungu zeOvulation.
Iimpawu ze-Ovulation Ukunyuka kobushushu bomzimba we-basal, ngokuqhelekileyo i-1/2 ukuya kwi-1 idigri, ilinganiswa nge-thermometer. Amanqanaba aphezulu ehomoni ye-luteinizing (LH), elinganiswa kwikiti ye-ovulation yasekhaya. I-mucus yomlomo wesibeleko, okanye ukukhutshwa kwe-vaginal, kunokubonakala kucacile, kuncinci, kwaye kunolulele, njengamaqanda amhlophe aluhlaza. Ukuthamba kwebele. Ukuqunjelwa.
Kuqikelelwa ukuba i-0.6 ukuya kwi-2.6% yabasetyhini abathatha ipilisi yasekuseni emva kokwabelana ngesondo ngokungakhuselekanga baya kukhulelwa. Into abantu abayaziyo – nabangakwaziyo – malunga nepilisi yakusasa emva kokuba eye yabonwa emva kokuba umbhali weRefinery29 ebelane ngebali lakhe lokukhulelwa nangona ethathe ucwangciso olungxamisekileyo.
ewe isazosebenza. Uninzi lophando lubonisa ukuba ukusebenzisa iPlani B akubangeli naluphi na utshintsho kulwelwesi lwesibeleko (endometrium). Hayi - i-contraception yongxamiseko (eyaziwa ngokuba yipilisi yasekuseni) inokunceda ukukhusela ukukhulelwa emva kwesondo esingakhuselekanga, kungekhona ngaphambili.
Isicwangciso B asiyi kwenzakalisa umntwana ongekazalwa. Ukuba iPlani B ithathwa ngephutha ngexesha lokukhulelwa, ayiyi kulimaza umntwana okhulayo. Ukusebenzisa iPlani B akuyi kuchaphazela amandla omfazi okukhulelwa kwixesha elizayo. Abasetyhini bangazigcina iipilisi ekhaya xa kukho unxunguphalo.
I-Plan B yipilisi yokuthintela ukukhulelwa, oku kuthetha ukuba ithintela ukukhulelwa. Ukuba sele ukhulelwe, ipilisi ayiyi kusebenza. Ichiza "aliyi kuphazamisa okanye lichaphazele ukukhulelwa okukhoyo," ngokutsho kukaTeva.
Isicwangciso B sisithinteli-kukhulelwa sikaxakeka, kwaye kufuneka sithathwe kwiiyure ezingama-72 zokukhawulwa okunokwenzeka. Ayizi kuchaphazela iziphumo zovavanyo lwakho lokukhulelwa. Ngenxa yokuba iimvavanyo zokukhulelwa azichanekanga iiyure ezingama-72 emva kokukhulelwa, iSicwangciso B asiphazamisi.
Iimpawu zokukhulelwa kwiveki ye-1 isicaphucaphu kunye okanye ngaphandle kokuhlanza. utshintsho lwebele kubandakanywa ukuthamba, ukudumba, okanye ukuntyiloza, okanye imithambo eblue ebonakalayo. ukuchama rhoqo. intloko ebuhlungu. ubushushu bomzimba obuphakanyisiweyo. ukuqunjelwa esiswini okanye igesi. i-pelvic cramping encinci okanye ukungakhululeki ngaphandle kokopha. ukudinwa okanye ukudinwa.
Uninzi lweemvavanyo zasekhaya ze-FSH ziyafana kakhulu kuvavanyo lokukhulelwa olwenziwa ekhaya. Ukuvavanya ngokulula, sebenzisa ikomityi encinci ukuqokelela umchamo ukusuka kumchamo wokuqala wosuku. Emva koko dibanisa intonga yovavanyo kwisampulu yomchamo kwaye ubeke endaweni ethe tyaba ngelixa iziphumo zovavanyo zibhalisa.
Unokukhulelwa ukuba unesondo esingakhuselekanga naphi na ukusuka kwiintsuku ze-5 ngaphambi kwe-ovulation kude kube yi-1 ngosuku emva kwe-ovulation. Awukwazi ukukhulelwa xa ungakhulelwanga ngenxa yokuba alikho iqanda lokuqhamisa isidoda. Xa unomjikelo wokuya exesheni ngaphandle kokukhupha i-ovulation, kubizwa ngokuba ngumjikelo we-anovulatory.
Uphawu oluphambili lokungazali kukungakwazi ukukhulelwa. Umjikelo wokuya exesheni omde kakhulu (iintsuku ezingama-35 okanye ngaphezulu), mfutshane kakhulu (ngaphantsi kweentsuku ezingama-21), ungaqhelekanga okanye ungabikho kunokuthetha ukuba awukhuphi iqanda.
Ukukhulelwa kunokwenzeka kuphela xa ulala ngesondo ngexesha leentsuku ezintlanu ngaphambi kwe-ovulation okanye ngosuku lwe-ovulation. Kodwa ezona ntsuku zichumileyo ziintsuku ezintathu ezikhokelela kwi-ovulation. Ukwabelana ngesondo ngeli xesha kukunika ithuba elihle lokukhulelwa.
Impendulo eKhawulezayo: UngaCwangcisa i-B Mess kunye noMjikelo wam
Ngaba uCwangciso B luyakumosha uMjikelo wakho wokuya exesheni
Impendulo eKhawulezayo: Ngaba iPlani yePilisi yeB iMess Up Cycle
Impendulo eKhawulezayo: UngaCwangcisa i-B Mess Up Period Cycle
Ungayicwangcisa iB Mess kunye noMjikelo wakho
Iza kuCwangcisa uB iMess Up Cycle yam
Impendulo eKhawulezayo: UngaCwangcisa i-B Mess Up My Period Cycle
UngaCwangcisa uB Moss Up Umjikelo wakho olandelayo
Umbuzo: Ngaba uCwangciso lwe-B lumoshakele uMjikelo wakho wokuya exesheni
Umbuzo: UCwangciso lweB luNxibisa ixesha elingakanani umjikelo
Umbuzo: Ngaba unokuCwangcisa u-B ukuphazamisa uMjikelo wakho wokuya exesheni
Impendulo eKhawulezayo: UngaCwangcisa i-B Mess kunye noMjikelo wakho weXesha